I-Elite 3, inketho eshibhe kakhulu ka-Jabra, igcina ikhwalithi [Buyekeza] | Izindaba zegajethi
I-Elite 3, inketho eshibhe kakhulu ye-Jabra, igcina ikhwalithi [Buyekeza]
UMiguel Hernandez | 20/12/2021 10:00 | General, Izibuyekezo
Sibambene nokwethulwa kwe-Jabra Elite 7 Pro esiyihlaziye lapha ku-Actualidad Gadget muva nje, enye indlela eshibhe kunazo zonke kukhathalogi ye-Jabra kuze kube manje ifikile, sikhulume ukuthi bekungeke kube ngenye indlela nge-Elite 3, inguqulo yayo "evinjelwe" kakhulu esengumkhiqizo we-Jabra nazo zonke lezi umthetho.
Sikulethela ukuhlaziya okujulile kwe-Jabra Elite 3, imodeli enokuzimela okukhulu nokumelana namanzi ngomsindo ongcono kakhulu. Wahlole kanye nathi ukuze uthole ukuthi amahedisethi e-Jabra athengeka kakhulu angakunikezani kuze kube manje.
3 I-Jabra Sound + okufanele ube nayo
4 Ukumelana nenduduzo
5 Ukuzimela kanye nemibono ngemva kokusetshenziswa
Mayelana nokubukeka, njengobuningi bamahedisethi e-Jabra, umugqa wokuklama wefemu uyagcinwa, imikhiqizo lapho ukunethezeka nomsindo kunqoba ngokusobala ngaphezu kwakho konke okunye. Ngale ndlela, i-Jabra iyaqhubeka nokugcina amafomu ayo angavamile ukuthi nakuba engase angabonakali emuhle kakhulu emakethe, anesizathu sokuba khona, esesivele singaphezu kwalokho abakhiqizi abaningi abangakusho.
Izilinganiso ze-Headphone: 20,1 × 27,2 × 20,8mm
Izilinganiso zekesi: 64,15 × 28,47 × 34,6mm
Icala, ngakolunye uhlangothi, ligcina ukwakheka nobukhulu bomkhiqizo, isitayela "sebhokisi lamaphilisi" esivame kakhulu e-Jabra futhi, njengama-headphone, sigxile kuphela ekusebenzeni nasekuqineni. Kulo mcimbi, lapho bebefuna "ukusungula" lawa ma-Jabra asohlwini lwemibalabala, lapho ngaphezu kwegolide lakudala elimnyama nelikhanyayo, sizokwazi ukufinyelela inguqulo enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka nolunye olunsomi ngokukhanyayo. .edonsa amehlo. KANYEImodeli ehlaziywe esimweni sethu imnyama, ehlanganisa kuphakheji: Amakhushini endlebe ayisikhonkwane ayisithupha (kubalwa lawo asevele enamathiselwe kuma-earbud), ikesi lokushaja, ikhebula le-USB-C, nama-earbud.
Sinama-headphone anazo ngabashayeli (izikhulumi) ezingamamilimitha ayi-6, lokhu kuyabahlinzeka ngokusekelwe emininingwaneni yobuchwepheshe 20 Hz kuya ku-20 kHz umkhawulokudonsa wokudlala umculo futhi kusukela ku-100 Hz kuya ku-8 kHz uma sikhuluma ngezingxoxo zocingo. Ngokuvumelana nalokhu okushiwo ngenhla, inamakrofoni e-MEMS emine asisiza ukuba sigcine izingxoxo ezicacile, into evamile nase-Jabra. Umkhawulokudonsa wamakrofoni uphakathi kuka-100 Hz no-8 kHz, njengoba sibonile emininingwaneni ephathelene nomkhawulokudonsa wezingcingo.
Isisindo sekesi lokushaja: 33,4 amagremu
Isisindo sehedfoni: ama-4,6 amagremu
I-Qualcomm aptX yomsindo we-HD
Ngingayithenga kuphi i-Jabra Elite 3 ngentengo engcono kakhulu? Ku Lesi sixhumanisi.
Ezingeni lokuxhumana, lawa ma-headphone ane-Bluetooth 5.2 lapho amaphrofayili akudala kakhulu asetshenziswa i-A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HSP v1.2, enobubanzi bokusetshenziswa okujwayelekile kwamamitha ayi-10 kanye nokwenzeka yokubamba ngekhanda amathuluzi afinyelela kwayisithupha. Ngokusobala, ngenxa yokusetshenziswa kwe-Bluetooth 5.2, banesistimu yokuthungela okuzenzakalelayo lapho sibakhipha ebhokisini. kanye nokuvala shaqa okuzenzakalelayo futhi uma kuyimizuzu eyi-15 ngaphandle kokuxhumeka noma imizuzu engama-30 ngaphandle komsebenzi.
I-Jabra Sound + okufanele ube nayo
Uhlelo lokusebenza lwe-Jabra luyisengezo sesoftware esizosivumela ukuthi senze izinguquko ezidingekayo, ngale kwezinkinobho zemishini ezitholakala kuma-headphones ashiwo nokuthi singakwazi ukwenza ngendlela esiyithandayo kulolu hlelo lokusebenza, sinamandla okulinganisa kanye nezibuyekezo zesofthiwe ezenza isofthiwe yakho ibe ivelu efanelekile futhi ekwazi ukunquma ukuyithenga. Lolu hlelo lokusebenza, oluhambisana nawo womabili amadivayisi we-Android ne-iOS, likuvumela ukuthi wenze inani elihle lokucushwa okufanele uzame ngezizathu eziningi.
Ngale ndlela, sincoma ukuthi udlule kunoma imaphi amavidiyo esihlaziye kuwo amadivaysi e-Jabra kwezinye izikhathi ukuze ukwazi ukubona ukusebenza komsindo +, lolu hlelo lokusebenza lwe-Jabra olulandwa mahhala ngokuphelele.
Kulokhu sinamandla okumelana namanzi kanye nokuchaphaza ngesitifiketi se-IP55, lokhu kusiqinisekisa okungenani ukuthi sizokwazi ukuwasebenzisa emvuleni kanye nalapho siziqeqesha, Mayelana nalokhu, i-Jabra igcina izinga lekhwalithi kungakhathaliseki ukuthi, njengoba sishilo, Sibhekene nomkhiqizo oshibhe kakhulu kuze kube manje kukhathalogi yenkampani.
Ngendlela efanayo, ezingeni lokuthuthukisa ikhwalithi yokuxhuma nokunethezeka kokusetshenziswa, lawa ma-Jabra Elite 3 anezinhlanganisela ezintathu zesofthiwe ethokozisayo evela eceleni engenza ukuphila kwethu kube lula:
I-Google Fast Pair, yokumatanisa okuhlanganiswe ngokugcwele nokusebenza kumadivayisi ahambisanayo e-Android ne-Chromebook.
I-Spotify Tap, ukuthuthukisa nokwenza ngendlela oyifisayo ukucushwa kwezinkinobho uma sisebenzisa inkundla yokudlala ye-Spotify.
I-Alexa ehlanganisiwe ukuze iphinde ihlanganyele nomsizi obonakalayo we-Amazon.
Ukuzimela kanye nemibono ngemva kokusetshenziswa
I-Jabra isinikeze idatha ethembekile mayelana ne-mAh yebhethri, into evamile kumkhiqizo, nokho Babikezela amahora angu-7 okuzimela ngenkokhiso futhi kufika emahoreni angu-28 uma sifaka izindleko ezenziwe necala. Ifemu iphinde isithembise ukuthi ngemizuzu eyishumi nje yokushaja sizothola cishe ihora elilodwa lokusebenzisa. Le datha ikhiqizwa kabusha cishe ngokuphelele ekuhlolweni kwethu, ikakhulukazi uma kucatshangelwa ukuthi ayinakho ukukhanselwa komsindo osebenzayo (i-ANC) futhi inqobo nje uma singasebenzisi imodi ye-HearThrough kakade etholakala cishe kuwo wonke amadivayisi we-Jabra amabanga ahlukene.
Ikhwalithi yomsindo yinhle impela uma ucabangela intengo, izinga lekhwalithi eligcinwa e-Jabra ngokuhamba kwesikhathi, futhi lokho Lawa ma-Elite 3 angatholwa ngaphansi kwama-euro angama-80 kumaphuzu ajwayelekile okuthengisa, okubenza babe ukukhetha okuhle kulabo abafuna ukuthenga umkhiqizo we-Jabra okokuqala ngqa noma bathathe indawo yezenzakalo "ezikhethekile". Ngaphandle kokungabaza, njengenjwayelo, u-Jabra ukwazile ukwenza umkhiqizo ongenasizotha onikeza lokho akunikezayo.
Kuthunyelwe ku: December 20 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: December 11 we-2021
Ikhwalithi yomsindo enhle kakhulu namandla
Izintengo ezimaphakathi kwa-Jabra
Awekho amaphedi anethezekile
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Elite 3, inketho eshibhe kakhulu ye-Jabra, igcina ikhwalithi [Buyekeza]